Fantatro sy Iainako ary Tiako Izany. - Ann M. Dibb
Nilahatra mba hiantsena tao amin’ilay toeram-pivarotana kojakojan-kanina tany amin’ny toerana nisy ahy aho taona vitsy lasa izay. Nisy zatovovavy iray 15 taona teo ho eo, teo alohako. Toa feno fahatokian-tena sy fifaliana izy. Tsikaritro ilay ambonin’akanjo nanaovany ka tsy naharitra aho fa dia niresaka. Nanomboka aho nanao hoe: “Avy any amin’ny faritany h